Semalt विशेषज्ञ विशिष्ट लि Link्क-निर्माण गल्तीहरूको स्पष्टीकरण गर्दछ
पछिल्लो दिनमा लिंकहरू निर्माण गर्न सजिलो भएको थियो। तपाईं जहाँ पनि लिंकहरू बनाउन सक्नुहुन्थ्यो र जे होस् तपाईंलाई मनपर्दछ र परिणाम स्वरूप तपाईंको दृश्यतामा समान वृद्धि देख्नुहुन्छ। आजकल, लिंक निर्माण उद्योग जटिल, विविध र प्रवेश गर्न कडा छ। कुरालाई अझ नराम्रो बनाउनको लागि, यो मिथ्या र गलत धारणाहरु संग पनी छ जुन यसको भूतको भूतको परिणाम स्वरूप हो। सम्भावित रूपमा, लिंक निर्माण व्यवसायमा प्राय जसो एमेच्योरहरूले समान गल्तीहरू गरे।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक रस बार्बर, तपाइँबाट जोगिनको लागि सामान्य धोखी त्रुटिहरूको विशेषता दिन्छ।
१. गुणस्तरीय मात्रालाई प्राथमिकता दिदै
यो एउटा प्रलोभन हो जुन प्रायः व्यक्तिहरू लि link्क निर्माणको प्रयासहरूमा एक बिन्दुमा दिन्छन्। एक उच्च-गुणवत्ता लि link्क सम्भावित दर्जनौं कम-गुणवत्ता लि links्कहरू भन्दा राम्रो छ। यद्यपि उच्च-गुणवत्ता लि links्कहरू प्राप्त गर्न गाह्रो छ, जबकि कम-गुणवत्ता वालेहरू प्राप्त गर्न सजिलो छ। यदि यसले कम्तिमा प्रतिरोधको मार्ग अनुसरण गर्ने निर्णय गर्छ भने यसले तपाइँको लाग्नेछ।
तपाईंको लिंकहरूको मात्रा, यद्यपि लिंकहरूको कम गुणस्तरको लागि कहिले पनि बनाउदैन। एक उच्च गुणवत्ता लि link्क एक एसईओ को बढ़ावा भन्दा अधिक प्रदान गर्दछ। उनीहरूले रेफरल लिंक बेनिफिटको साथै ब्रान्डि benefits फाइदाहरू पनि प्रदान गर्दछ।
२. अत्यधिक अनुकूलन एch्कर पाठ
यो अवधारणा एक पटक प्रभावकारी लिंक निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। तर त्यो परिवर्तन भएको छ। आज, तपाईंको इनबाउन्ड लिंकहरूको एch्कर पाठले तपाईंलाई जरिवाना कमाउन सक्छ यदि त्यसले हेरफेर वा अप्राकृतिकताको ढाँचा सिर्जना गर्दछ। त्यस्ता दण्डहरु कडा हुन्छन्, र तपाई एकबाट पुन: प्राप्ति गर्न असमर्थ हुन सक्नुहुन्छ। यसको सट्टामा, यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ए log्कर पाठ तार्किक र सहयोगी छ।
R. सामग्रीमा भाग्नु
अनिवार्य रूपमा, तपाईंको लिंकहरू उच्च-गुणवत्ता सामग्रीको शरीरमा फ्रेम गर्नु पर्छ। यदि तपाईं आफ्नो सामग्रीमा हतार गर्नुहुन्छ वा सामग्रीमा तपाईंको लिंकलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने, खोज इञ्जिनले तपाईंको लिंकलाई शंकाको रूपमा देख्न सक्छ। केहि केसहरूमा, तपाइँ प्रकाशकहरु द्वारा अस्वीकृत हुने जोखिम पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सामग्री प्रकाशित गर्न लायकको योग्य छ तपाईंले त्यसलाई त्यहाँ राख्नु अघि।
Divers. विविधतामा विफलता
लिंक निर्माणमा सफल हुनको लागि, तपाईंको रणनीति सकेसम्म विविध हुनुपर्दछ। यसको मतलव तपाईले विभिन्न बिभिन्न स्रोतहरूमा भर पर्नु पर्दछ र तपाईको वितरणको ढाँचा घुमाउनु पर्छ। अर्केस्ट्रेटेड अनियमितताको डिग्री हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, तर यदि तपाईंले आफ्नो लि building्क भवन क्रुसेडबाट वास्तविक फाइदाहरू हेर्ने अभिप्राय राख्नुभयो भने यो गर्नुपर्नेछ।
Scale. मापन गर्न असफल
यो आम गलती हो एमेचर्सहरूले एक पटक तिनीहरूको लिंक निर्माण अभियानको गति बढ्न सुरू गरे। यदि तपाईं सुधार गर्न जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले माथिको मापन गर्नुपर्नेछ। यसमा राम्रो सामग्री सिर्जना गर्ने, उच्च गुणको स्रोतहरूसँग काम गर्ने र अधिक गुणस्तरको लिंकहरू निर्माण समावेश छ। यस विकास प्रक्रियाको प्रबन्धन करमा लाग्न सक्छ, तर अन्तिममा तपाई के गर्न चाहानुहुन्छ स्थिर छ।
यी गल्तीहरू गंभीरताका हिसाबले निर्दोष देखि विनाशकारीसम्मका छन्। जे होस्, तिनीहरू सजीलै रोक्न सकिन्छ। तपाईं कत्तिको राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने बावजुद, तपाईंले गल्तीहरू गर्नुहुनेछ। कसरी तपाइँ तपाइँको घाटा को कम गर्न को लागी, तथापि, निर्धारित गर्दछ कि तपाइँ अगाडि बढ्नुहुन्छ वा छैन।